Ngwa ndị na-eri ihe ndị kacha mkpa na ngwaọrụ gam akporo gị Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ ngwa 10 nke na-eri ọtụtụ akụrụngwa na ngwaọrụ gam akporo gị
Villamandos | | android, Mobiles
Ọ na-aghọwanye ihe kwesịrị ekwesị maka anyị ịwụnye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa na ekwentị anyị, ụfọdụ n'ime anyị anaghị enweta otu ugboro. Enweghị ọtụtụ ngwa ndị na-eri ọtụtụ akụrụngwa na ọnụ anyị, mana ole na ole na-eri ihe ndị dị na ngwaọrụ mkpanaka anyị, na-enweghị anyị ama.
Guysmụ okorobịa na Avast emeela a ọmụmụ na-akpali nke ngwa ndị na-eri ihe ndị ọzọ na ọnụ anyị na ngwaọrụ gam akporo, na taa anyị kpebiri ikwughachi ha ka ị wee nwee ike ịlele ama gị ma chọpụta ole ngwa ndị a arụnyere na ọkachasị nke ị ga-enwe, na-ejighị ha n'oge ọ bụla.
5 Shozụ ahịa Amazon
8 Nna ukwu dị ọcha
9 Mpempe akwụkwọ
Netwọk mmekọrịta ndị ama ama Snapchat Ọ tinyela onwe ya dị ka ngwa nke na-erepịakarị akụ na ụba na ọdụ anyị yana sistemụ arụmọrụ gam akporo, n'ọtụtụ akụkụ n'ihi na ọ na-eji igwefoto mgbe niile iji were onyonyo na vidiyo anyị na-ebipụta obere oge na profaịlụ anyị.
Ma ị na-eji ya mgbe niile ma ọ bụ na ọ bụghị, Snapchat ọ na-erepịakwa a nnukwu ego nke ihe onwunwe na-emekwa ka a dị ịrịba igbapu na batrị gị, yabụ lelee ya anya ma wepụ ya ma ọ bụrụ na ị naghị eji ya mgbe niile.
Na ọkwa nke abụọ bụ otu n'ime ngwa ndị ọ fọrọ nke nta ka anyị niile jiri na ndụ anyị kwa ụbọchị, dị ka Spotify, nke ahụ na-enyekwa anyị nnukwu katalọgụ nke egwu. Ọrụ egwu na-ebupụta na-eri ọtụtụ ndụ batrị, mana yana ebe nchekwa ma echefula ya, yana data mkpanaka ebe ọ bụ na ọ bụrụ na anyị ebudatara egwu kachasị amasị anyị na nhọrọ adịchaghị, ọ ga-eji data nke ọnụego anyị oge niile.
Ọ ga-afọ nke nta ka m kwuo na ọ naghị ada ka nke ukwuu Wattpad, ma ọ bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu maka ndị edemede na ndị na-agụ akwụkwọ, ebe onye nke mbụ nwere ike ịkekọrịta akụkọ ha, ndị nke abụọ na-enwe obi ụtọ ịgụ ha ma tụọ ha, na-agbakwunye nkọwa.
Na mgbakwunye na ọrụ ndị a, Wattpad bụ ihe kachasị nso na netwọkụ mmekọrịta, yana nsonye na-aga n'ihu n'iji data na akụrụngwa sitere na ọnụ anyị. Enweghị ọtụtụ ngwa ndị ọzọ dị n'ụdị a, mana ọ bụrụ na ịchọghị itinye ekwentị gị na nsọtụ ọdịda ahụ, ị ​​kwesịrị ileba anya na ojiji ya.
Ọ dị egwu ịghara ịhụ na ndepụta a ngwa ngwa ngwa ngwa n'etiti 3 ndị na-eri ọtụtụ akụ, mana n'ọnọdụ nke anọ anyị hụrụ Line, karịrị ngwa iji zipu ma nata ozi.
WhatsApp ma ọ bụ Telegram apụtaghị na ndepụta a, ihe na-enweghị obi abụọ dị oke mma maka ndị ọrụ niile nke ngwa abụọ a, ma ọ bụrụ na ị nwere Line ịwụnye, o yiri ka o doro anya na ị ga-eburu n'uche na ọ na-eri akụ gị na batrị gị.
Shozụ ahịa Amazon
Ọ na-enyo na-ahụ na n'elu ọnọdụ nke a ndepụta ngwa dị ka Shozụ ahịa Amazon, nke na-adịghị ka ọ bụ ụdị nke chọrọ ọtụtụ akụrụngwa iji rụọ ọrụ. Agbanyeghị, n'ihi iji oke netwọkụ eme ihe, ọ nwere ike bụrụ onye iro kachasị njọ anyị kwa ụbọchị. N'ezie, Amazon nwere ike ime ka anyị pụọ na nsogbu karịa ka ọ nwere ike ịmepụta anyị.
Chụgharị n’ Internetntanet nwere ike ịkwụsị ndidi gị ngwa ngwa, kamakwa, iji batrị ekwentị gị. Ma nke ahụ bụ Tinder, otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu n'ụdị a, nọ n'ọnọdụ nke isii n'etiti ngwa kachasị na-ewe ngwa.
Su ị useụbiga batrị, data na nchekwa (na mgbakwunye na ịnọgide na-agba ọsọ na ndabere n'oge niile) nke ama anyị na-etinye gị n'ọnọdụ dị njọ.
N'ezie, ndepụta a enweghị ike ịhapụ otu n'ime ọtụtụ ngwa ndị na-enye anyị ohere ịmara n'oge niile. SmartNews bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ nke na-enye anyị ohere ịgụ akụkọ sitere n'ọtụtụ mgbasa ozi n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. N'ezie, ọnụahịa a ga-agwa dị oke elu ma ọ bụ na ngwa ndị a kwesịrị ịmekọrịta data dị ukwuu kwa ụbọchị.
Dịka ọmụmaatụ, na mgbakwunye, interface SmartNews anaghị enyere aka nke ukwuu iji belata ojiji nke akụnụba yana ọ juputara na animations na ihe ndị ọzọ na-emetụta nnwere onwe nke ngwaọrụ anyị. Ọ dabara nke ọma, ngwa ndị a dị mfe iwepu na ọdụ anyị, ọ ga-ezuru ileta ụfọdụ ibe weebụ ka a gwa gị.
Nna ukwu dị ọcha
Master dị ọcha bụ otu n'ime ndị ahụ ngwa na-awa iji melite izugbe arụmọrụ nke gị ama, na dị ka ọmụmụ rụrụ site Avast osobo dị nnọọ abụghị. Ngwa a bụ otu n'ime ihe enyemaka kachasị mma na ngwaọrụ gam akporo anyị, nwee ogologo ndụ!
Anyị na-ekwukarị ya, mana ọ bụrụ na anyị megharịa ya, iji ụdị ngwa a bụ oge zuru oke na ugbu a ọ bụkwa ihe egwu maka batrị anyị ma ọ bụ n'ezie ebe nchekwa RAM anyị.
Ọ dị ka ihe ijuanya na site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa Google nwere na Google Play, naanị otu na-abanye na ndepụta a, ihe na-ekwukwa nke ọma banyere nnukwu ọchụchọ ahụ. Mpempe akwụkwọ Ọ bụ ngwa ahụ nke pụtara n'ọnọdụ nke itoolu, n'agbanyeghị na ọ dị mfe ọ na-eri nnukwu akụnụba.
Ihe kpatara ya siri ike ịchọta na ịdị mfe bụ ọkọlọtọ ya, mana anyị chere na ọ bụrụ na mpempe akwụkwọ agbasa ozi dị mgbagwoju anya, ọnụ ga-achọ nnukwu akụ iji kwado ya ma gosi anyị ya otu o kwesiri.
Iji mechie ndepụta a anyị na-ahụ ngwa nke onye ndu Britain bu The Guardian, nke bụ otu n'ime ngwa kachasị mma ịmara, mana na nloghachi ọ ga-eripịa akụ nke ama anyị. Ugbu a ị bụ onye a ga - ahọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka agwa gị ma ọ bụ nwee ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ mkpanaka gị ugboro ugboro.
Ole n’ime ngwa ndị a ka ị rụnyere na ekwentị mkpanaaka gị na sistemụ arụmọrụ Android?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọkụ ndi anyi nọ n’ime ya, ma gwa anyi ma you choro iri oke nri ndi mmadu.
Ozi ndị ọzọ - blog.avast.com
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ndị a bụ ngwa 10 nke na-eri ọtụtụ akụrụngwa na ngwaọrụ gam akporo gị
LG anaghị echere MWC iji gosi ya LG Watch Sport na Watch Style, a ga-eweta ha na Wednesde
Tizen ga-emelite ụdị nke 4.0 n'etiti afọ a 2017